Ufuna ukuzivulelaeyakhe indawo yokujima | Isolezwe
Ufuna ukuzivulelaeyakhe indawo yokujima
intandokazi / 10 January 2019, 12:29pm / ZANELE MTHETHWA
UNKSZ Thoko ‘MJ’ Mahlambi oyiFitness Instructor osewine nemincintiswano, osefuna ukuba nendawo yakhe yokuzivocavoca
UFUNA ukuba nendawo yakhe yokuzivocavoca owesifazane osemncane osanda kuwina umncintiswano wokuba yiBest Instructor.
UNksz Thoko ‘’MJ’’ Mahlambi uwine emncintiswaneni obizwa ngeKumnandi Ekhaya International Aerobics Marathon ebiseDurban University of Technology (DUT) ngoDisemba. Kulo mncintiswano uNksz Mahlambi (24), ubesethimbeni elilodwa noMnuz Nkosinathi Mthembu ongumnikazi weNammahe Fitness Club, athi nguyena omqeqeshile wambeka nakuleli zinga lemincintiswano.
“Kade ngaba nothando lokuzivocavoca ngoba ngenza iDrama neChoreography eDUT, engicabanga ukuthi kuyahambisana nokunakekela umzimba nokujima.
“Bengivele ngithanda ukujima ngagcina sengiqeqesha abanye njengeFitness Instructor. Sengenza namaBoot Camp ukusiza abanye abathanda ukujima futhi ngifisa ukuba uFitness Instructor owaziwa umhlaba wonke,” uchaze kanje.
UNksz Mahlambi uthe ubengaqali ukungenela umncintiswano ofana nalona awuwinile njengoba angenela omunye waseDUT ngo-2016 nakhona wawina. Uthe uqale ngo-Ephreli odlule ukwenza amakilasi okujimisa abanye, awenza ekhempasini yaseDUT eMgungundlovu naseNicholson Field College.
“Ngiyazikhandla ngoba ngifuna ukukhula kulo mkhakha wokujima. Ukuwina lo mncintiswano wakamuva akwanele kodwa ngisafuna ukungenela neminye imincintiswano ngisho kuzwelonke,” kusho yena.
Utshele Isolezwe ukuthi akulula ukuba kulo mkhakha wokuzivocavoca ngoba kumele umzimba uhlale usesimeni. Uthe sebebaningi abenza okufanayo, okwenza nezinga lokuncintisana libe phezulu. Uveze ukuthi yize eqinisekisa ukuthi ujima zonke izinsuku, kuyenzeka umzimba ungavumi kodwa kumele aziphoqe.
“Okungikhuthazayo ukubona abanye abaqeqeshi asebesezingeni eliphezulu kunami. Kwesinye isikhathi ngiya ejimini ngizihudula kodwa ngikhuthale uma sengibona bona.
“Okubalulekile ukuthi umzimba wami uhleleke, ngibe yisibonelo nakulabo engibaqeqeshayo,” kusho yena.
UNksz Mahlambi uthe uzivocavoca kabili ngosuku ukuze umzimba ubukeke. Ugcizelele ukuthi ukujima kukodwa ngeke kumsize kodwa uyazincisha nokudla okungawulungele umzimba.
Ebuzwa ukuthi akalahlekile yini ngokugxila kulo mkhakha ekubeni efundele okunye, uthe akunjalo.
“Empeleni ayikho into engiyithokozela njengalo msebenzi engiwenzayo manje. Angiboni kube ukuchitha isikhathi ukwenza iDrama neChoreography ngoba ukujima kuyefana nomdanso,” kusho yena.
UNksz Mahlambi uthweswe iziqu ngo-2017 eDUT futhi uzibona engena kulo mkhakha weFitness awuphendule ibhizinisi njengoba efisa nokuba nejimu.